Sedimentology: ihe ọ bụ, ihe ọmụmụ na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ngalaba nke geology nke na-elekwasị anya n'ịmụ banyere sedimenti. Ọ bụ ihe gbasara sedimentology. Nke a na ngalaba nke sayensị na-elekwasị anya na-amụ sedimenti na ha guzobere. Sediment bụ nkwụnye ego nke na-etolite n'elu ala na ala nke oké osimiri. Ha nwere ike ime site na usoro usoro ihe omumu di iche iche ma di oke nkpa na igbanwe ala nke ala.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị gbasara njirimara na ihe ọmụmụ niile nke sedimentology.
2 Usoro usoro ọgwụgwọ
3 Usoro ihe omimi nke sedimentology
3.1 Igha ihu igwe
4 Oze na njem na sedimentology
Sediments Ha bụ nkwụnye ego nke na - etolite n’elu ala na ala nke oke osimiri. Mepụta sedimenti n'akụkụ buru ibu dabere na omume anụ ahụ na nke kemịkal dị na mgbanwe nke nkume ahụ. Iji maa atụ, ikuku na okwute na-ebute mmekọrịta nke, ya na mmiri, ka a na-akpọ usoro ịpụ apụ. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị na-emepụta sedimenti.
Imirikiti usoro sedimentological na-eme n'ihi ọrụ nke nrụgide dị elu na ọnọdụ okpomọkụ. Sedimentology na-elekwasị anya n'ịmụ uwe nke nkume siri ike, njem ha na ntinye ha. Nkwụnye ego ahụ na-achọpụta na eserese nke nkume sedimentary. Si ebe a na-abịa aha sedimentary nkume. Ọ bụ nchịkọta nke sitere na sedimenti dị iche iche wee mebe nkume. Usoro a aghaghi imezi ihe na nhazi oge nke ala ebe ọ bụ na enweghị ike ịgụta ya na ogo mmadụ. Anyị na-ekwu maka ọtụtụ nde afọ maka nguzobe nkume ndị a.
Sediments bụ ihe ndị etinyela na mmiri, site na omume nke ice, ikuku ma ọ bụ na mmiri ọgwụ. Usoro ihe niile a na - eme n’elu ala ma n’ime mmiri.
Usoro usoro ọgwụgwọ
Usoro ihe eji echekwa mmiri na-amalite site na mbibi nke nkume siri ike kpatara site n'ụdị dị iche iche nke ndị na-ahụ maka ọdịdị ala. Na nchịkọta, usoro ndị a bụ: tiori, mbuze na mbufe nke onye na-ajụ ihe dịka mmiri, ikuku na ice. Enwere ike ịmalite ya site na nkwụnye ego ma ọ bụ ọdịda na, n'ikpeazụ, diagenesis ihe bụ usoro e guzobere nkume siri ike. Usoro sedimentary nke amụrụ banyere sedimentology dị oke mgbagwoju anya ma dabere n'ọtụtụ ihe.
Ebumnuche bụ isi nke sedimentology na-arụ ọrụ dị mkpa na ngalaba sayensị. Mmasị akụ na ụba na ụfọdụ nkwụnye ego na gburugburu sedimentary bụ mpaghara ọdịnala ọdịnala nke sedimentology. Karịsịa na-eme nnu, gravel, ájá na kol. Enwerekwa ọnụọgụ na-enweghị ngwụcha nke nkwụnye ego sitere na sedimentary, abụọ dị ka akwa akwa. Ya mere, sedimentology bụ isi ihe na-aghọta gburugburu ebe obibi na ngosipụta nke ụfọdụ mmetọ dị ka osimiri na oké osimiri. Iji nyochaa mmetọ dị ka usoro mmiri, ị ga-ebu ụzọ ghọta etu osimiri si arụ ọrụ, ọkachasị osimiri na-emetọ. Ebe deposition nke sedimenti dị oké mkpa.
N'ime sedimentology anyị na-ahụ geotechnics. Karịsịa na-elekwasị anya n'ịmụ ihe nkwụsi ike nke ala ma bụrụkwa ubi dị oke mkpa tupu ọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwu ụlọ isi ụlọ ọrụ, buru ụzọ chọpụta ogologo oge nke ala ahụ. Nnukwu ọrụ mgbagwoju anya nke ọtụtụ nnukwu ọrụ dị ka tunnels, àkwà mmiri, ọdọ mmiri, okporo ụzọ na skyscrapers chọrọ nyocha zuru oke nke ala. Ọ dabere na ihe niile a na-arụ ọrụ ndị a ma ghara ibute ụdị ihe egwu ọ bụla.
E jikọtara ihe egwu ala na usoro sedimentary. Iji maa atụ, egwu ide mmiri ga-emetụta onye ọ bụla nọ n’ọkwá dị elu n’atụmatụ obodo, mpaghara ma ọ bụ ọgbakọ. Alluviums bụ nnukwu mmiri nke apịtị na apịtị na-eme mgbe mmiri na-eburu mmiri niile ma na-agbakọta na-akpata nnukwu mmiri. Idei mmiri na mbuze nke mmiri iyi na osimiri ma ọ bụ osimiri ndị ọzọ bụ phenomena nke dị mkpa karịa ka enwere ike ịdị na sedimentology.
Ọ na-elekwasịkwa anya n'ịmụ banyere mmiri dị n'ime ala. Omume nke ebe niile ebe nchekwa mmiri dị n'okpuru dabara na ụfọdụ akụkụ sedimentological. N'oge a, ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa ịmara ụba mmiri na ọwa mmiri, kamakwa ogo nke akụ a.
Usoro ihe omimi nke sedimentology
Na mbụ anyị kwuru na usoro usoro usoro ala na-amalite site na mbibi nke ihe ndina. Nke a nwere ike inye ụfọdụ ndị ọrụ gbasara ihu ala dịka ihu igwe, ịkwaga na sedimentation. N'ikpeazụ, a na-emepụta diagenesis nke ịmepụta nkume. Ka anyị hụkwuo ntakịrị ihe iji hụ miri emi ihe usoro mbara ala ndị a bụ.
Igha ihu igwe
A na-eke ihu igwe na physics na kemistri, ka anyị lee nke ọ bụla n’ime ha:
Oge ihu igwe: ọ bụ usoro na-agbaji ma ọ bụ gbanwee nkume dabere na omume ha na ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Ha nwere ike igbari ha ma ghasaa ha. Ha na-arụkwa ọrụ na mineral. Ihe na-akpatakarị ihu igwe nkịtị bụ mmiri ozuzo, ice, gbazee, ifufe, na mgbanwe ndị na-aga n’ihu n’ọ̀tụ̀tụ̀ abalị na abalị.
Chemical ihu igwe: Ọ bụ nke na-eme tumadi na ihu igwe dị mmiri mmiri na-ebute mmeghachi omume kemịkal nke na-eme n’etiti ikuku nke ikuku na mineral ndị dị na nkume. N’okwu a, ihe na-ewere ọnọdụ bụ mbibi nke ụmụ irighiri ihe ndị a. Mmiri na ọnụnọ nke gas dị ka oxygen na hydrogen na-abụ ihe na-akpali maka mmeghachi omume kemịkal na-akpata ihu igwe.
Oze na njem na sedimentology
M mbuze na-eme mgbe mmiri ozuzo, ifufe, na mmiri na-asọ na nkume. Nke a bụ otu esi agbasasị na nrụrụ nke otu ihe na-aga n'ihu. Ationgbọ njem bụ usoro sitere na mbuze. A na-ebugharị iberibe mmiri na nsị niile nke mbuze keere site na mmiri, glaciers na ifufe.
Sedimentation bụ nzọụkwụ ikpeazụ ma kwekọrọ deposition nke ihe siri ike nke ebuchara site na mbuze. A na-akpọ ihe ndị a sedimeti. Ebe ndị nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke nsị bụ ọnụ mmiri na ebe dịka oke osimiri na oke osimiri. A na-ewepụsị nsị nke otu mgbe etinye ya, n'aka nke ndị ọrụ ala ndị ọzọ dị ka mbuze na ihu igwe. Ọ bụrụ na sedimenti ndị a enweta nnukwu ogo na mkpokọta kemgbe ọtụtụ afọ, a na-akpụzi nkume ndị na-edozi ahụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere sedimentology na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Zụ
Ugwu ugwu Arctic
Ihu igwe nke Portugal